Connection | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
ပီစီမှ အင်တာနက် ဆက်သွယ်မှုကို Android စမတ်ဖုန်းတွင် အသုံးပြုနည်း
များသော အားဖြင့်တော့ Android Phone မှ အင်တာနက် ဆက်သွယ် မှုကို ပီစီ များမှာ ရယူ အသုံး ပြုလေ့ ရှိပါတယ်။ ဒါကို Tether လုပ်တယ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒါပေ မယ့်လည်း ပီစီမှ အင်တာနက် ဆက်သွယ် မှုကို ဖုန်းမှာ အသုံးပြု ချင်ရင် Reverse Tether ပြုလုပ် နိုင်ပါတယ်။
ဒီလို လုပ်ဖို့ နည်းလမ်း များစွာ ရှိပါတယ်။ WiFi Hotspot, Bluetooth, USB Cable နည်းလမ်းများ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်း များက သင့်ဖုန်းမှ Mobile Data ကို ချွေတာ ချင်ရင် ဒါမှ မဟုတ် သင့်ဖုန်းမှာ အင်တာနက် မရ ရှိဘဲ ပီစီမှ အင်တာနက်ကို အသုံးပြု ချင်ရင် အသုံးဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အလွယ်ဆုံး နည်းကတော့ ပီစီမှာ WiFi Hotspot တစ်ခု ပြုလုပ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို လုပ်ဖို့ အတွက် ပီစီမှာ WiFi Hardware လိုအပ် ပါတယ်။ Laptop များမှာတာ့ WiFi Hardware ပါရှိလေ့ ရှိပါတယ်။ WiFi Hardware မပါတဲ့ ပီစီတွေ အတွက်တော့ USB-to-WiFi adapter ကို အသုံးပြု နိုင်ပါတယ်။
Android Phone နဲ့ Tablet တွေက ad-hoc network ကို အထောက် အပံ့ပေးခြင်း မရှိ ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် Virtual Router Software ကို အသုံး ပြုပြီး WiFi Hotspot တစ်ခု ဖန်တီး နိုင်ပါတယ်။ Android Device တွေက အဲဒီ WiFi Hotspot ကို ချိတ်ဆက် နိုင်ကြ ပါတယ်။
Virtual Router ကို အောက်မှာ ပေးထားတဲ့ လင့်ကနေ ရယူနိုင်ပါတယ်။
▼ Virtual Router - Wifi Hot Spot for Windows 8,7and 2008 R2 ▼
Bluetooth ဆက်သွယ် မှုကို အသုံးပြု ပြီးလည်း အင်တာနက် ဆက်သွယ်မှုကို မျှဝေနိုင် ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ Android Phone, Tablet ဟာ Android 4.0 နဲ့ အထက် ရှိဖို့ လိုအပ် ပါတယ်။
ဖုန်းမှာ Bluetooth ဖွင့်ပါ။
ပီစီမှာ Bluetooth PAN ( Personal Area Network) ကို ဖွင့်ဖို့ အတွက်
၁။ Control Panel ထဲသွားပြီး Search Box မှာ Adapter လို့ ရိုက်ပါ။ Network and Sharing Center အောက်မှ View network connections ကို နှိပ်ပါ။
၂။ Personal Area Network အောက်မှ Bluetooth Network Connections ကိုနှိပ်ပါ။
၃။ Toolbar ပေါ်မှ View Bluetooth network devices ကို နှိပ်ပါ။
၄။ Bluetooth Personal Area Network Devices dialog box ထဲမှ Bluetooth devices အောက်မှာ သင်ချိတ်ဆက် ချင်တဲ့ စမတ်ဖုန်းကို တစ်ချက် နှိပ်ပြီး Connect ကို နှိပ်ပါ။
WiFi ဆက်သွယ် မှုဟာ Bluetooth ထက် မြန်ဆန်တဲ့ အတွက် ဖော်ပြ ပြီးတဲ့ နည်းလမ်း နှစ်ခုမှာ WiFi Hotspot ပြုလုပ်ပြီး အင်တာနက် ဆက်သွယ်မှု မျှဝေတဲ့ နည်းလမ်းကို အသုံး ပြုသင့် ပါတယ်။
USB Cable ( Root Only )
USB ကြိုးကနေ တစ်ဆင့် ပီစီမှ အင်တာနက် ဆက်သွယ်မှုကို ဖုန်းထံ မျှဝေနိုင် ပါတယ်။ ဖုန်းဟာ Root လုပ်ထားဖို့ လိုသလို Settings>Development ထဲမှ USB Debugging ကို On ထားရ မှာပါ။ ပီစီမှာ အသုံးပြု ရမယ့် Android Reverse Tethering Tool ကို အောက်ပါ လင့်မှ ရယူပါ။
▼ [Tool][Windows Only][Root] Android Reverse Tethering 3.19 ▼
Software ကို အင်စတော လုပ်ပြီးရင် ဖုန်းကို ပီစီနဲ့ USB ကြိုးမှ တစ်ဆင့် ချိတ်ဆက်ပါ။ Selectadevice မှာ သင့်ရဲ့ ဖုန်းကို ရွေးပေးပြီး Connect ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။ ဒါဆိုရင် ဖုန်းမှာ လိုအပ်တဲ့ Apps နှစ်ခု ဖြစ်တဲ့ Busybox နဲ့ Redsocks တို့ကို ထည့်သွင်း ပေးမှာပါ။
ဒါဆိုရင် ပီစီမှ အင်တာနက် ဆက်သွယ် မှုကို ဖုန်းမှာ အသုံးပြု နိုင်ပါပြီ။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Wednesday, May 06, 20152comments:
ကဏ္ဍ Connection, WiFi, နည်းပညာ
Connectify Hotspot V9.0.3 Crack 100%
မင်္ဂလာပါဗျာ Software လေးတွေကို မတင်တာ ကြာပြီ ဆိုတော့ သူငယ်ချင်းများ အတွက် Connectify
Hotspot လေးကို တင်ပေး လိုက်ပါတယ် ဒီ Software လေး ကတော့ မိမိမှာ အသုံးပြူနေတဲ့ Internet
လိုင်းကို ပြန်လည် မျှဝေ အသုံးပြူလို့ ရတဲ့ Software လေးပါ။
ပြီးတော့ Internet Speed ကိုလည်း မြင့်စေပါတယ်။ လို ချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းများ အတွက် အလွယ်တကူ
ယူလို့ ရပါတယ် ယူတဲ့ သူငယ်ချင်းများလည်း အားလုံး အဆင်ပြေ ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
▼ Software Home Site Download ▼
Install Software EXE Serial and Key Keygen and Crack
▼ solidfiles.com ▼ OR ▼ ziddu.com ▼ OR ▼ my.pcloud.com ▼
▼ solidfiles.com ▼ OR ▼ mega.co.nz ▼
ကဏ္ဍ Connection, WiFi
BitTorrent Pro 7.9.2 Build 37755 Stable
BitTorrent Pro 7.9.2 Build 37755 Stable | 1.36 MB
ကဏ္ဍ Connection, Download-Manager
– Directly recover deleted SMS text messages and contacts
– Retrieve photos and video lost due to deleting, restoring factory settings, flashing ROM, rooting, etc., from SD cards inside Android devices
– Preview & selectively recover messages, contacts and photos before recovery
– Support multiple Android phones and tablets, like Samsung, HTC, LG, Motorola, and so forth
– Only read and recover the data, no personal info leaking
– Automatically scan your device after connected to the computer;
– Recover sent & received messages, and export in HTML to PC for easy reading and printing;
– Retrieve deleted contacts, including names, numbers, Email & addresses, and export in HTML, vCard and CSV to PC;
– Regain photos and video from SD cards inside Android devices toacomputer.
– Existing data and deleted data each have their own color in the scan result;
– Browse and backup them fromadevice to your computer;
– Re-sync contacts backup toadevice via Wondershare MobileGo for Android.
– Preview all recoverable contacts, messages and photos before recovery;
– Selectively recover what you want by selecting them from the scan result.
– Available for hot Android phones and tablets from Samsung, HTC, LG, Sony, Motorola, ZET, Huawei, etc.;
– Support lots of Android OS versions;
– The list of devices and Android OS is still rapidly growing.
Download : Wondershare Dr.Fone for Android 4.8.2.142 DC 26.12.2014 | 41.64 MB
ကဏ္ဍ Android, Connection, PC-Software, Phone Application
ဖုန်းထဲကနေ အင်တာနက် သုံးတဲ့ သူတွေ အတွက် အသုံးဝင်မဲ့ Data Monitor လေးဖြစ် ပါတယ်။
သူကဘာတွေ လုပ်ပေးလည်း ဆိုတော့ အင်တာနက် သုံးတဲ့ အခါ ကိုယ်သုံးထားတဲ့ အင်တာနက်
data တွေကို နေ့အလိုက် လအလိုက် မှတ်ထားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ကိုယ်တစ်နေ့ကို အင်တာနက် data ဘယ်လောက်သုံးမယ် လအလိုက် ဘယ်လောက်သုံး
မယ် စတာတွေကိုလည်း သတ်မှတ်ထားပေးလို့ရပါတယ်။
ဥပမာ တစ်နေ့ကို အင်တာနက် 100MB သုံးမယ်လို့ သတ်မှတ်ထားပေးရင် 100MB ပြည့်တာနဲ့
file size 2.2MB ပဲရှိပြီး android 4.0 ကစပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်
Version : 1.6.619
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Friday, December 26, 2014 No comments:
ကဏ္ဍ Android, Connection, Internet, Phone Application
Download : Mobogenie 3.3.2 | 33.28 MB
ကဏ္ဍ Connection, PC-Software, Phone Application